साउनमा माछा-मासु किन खानु हुँदैन, किन उपवास बस्ने ? वैज्ञानिक कारण
रोचक साउनमा माछा-मासु किन खानु हुँदैन, किन उपवास बस्ने ? वैज्ञानिक कारण
Nepal Online Patrika: साउन महिना, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना । यो महिनामा केही धार्मिक पर्वहरु पनि पर्छ । यो साउने संक्रान्तिको महिना हो । यो बोलबमको महिना हो । भगवान शिवको आरधानाको महिना हो । उपवासको महिना हो ।
एउटी श्रीमती हुँदाहुँदै श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएपछि दुई श्रीमतीले श्रीमानको बाँडफाँड गरे । तर यो बाँडफाँडमा धाँधली भएपछि तनाव भएको छ ।